Ngalaba Na-adịghị Agbagha | Martech Zone
Ngalaba Na-adịghị Achọgharị
Monday, September 25, 2006 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
M ka na-ahụ ọgwụ nke UI na Nchọgharị App na isiokwu na mkparịta ụka na ntanetị. Google egosila na ị nwere ike ịnweta ngwa sava sava nke siri ike tinye na ihe nchọgharị weebụ. Obi abụọ adịghị ya n’uche m na nke a bụ ọdịnihu nke mmepe weebụ yana ngwa ya. Sistemụ arụmọrụ nke ọdịnihu nwere ike ịbụ ihe nchọgharị na onye ọrụ nwere ike iji, bufee, ma mepee faịlụ gafee sava karịa karịa ndị ahịa. Nke a ga - echekwa na bandwit yana nchekwa mpaghara, nchedo nje, nwelite, wdg, wdg.
N'ezie, mgbanwe a ga-agbanwekwa otu esi arụ ọrụ. M na-agụ banyere Kinlọ Ọrụ Raskin N'ịntanetị ma ọ maghị na enwere ụlọ ọrụ na-amụ mmekọrịta mmadụ na kọmputa. Chaị. Enwere m ike iburu akwụkwọ ahụ.
Apple etinyeworị teknụzụ na-arụ ọrụ (ihe ijuanya!) Site na ngwaike ya… anyị kwesịrị ịmalite ịhụ ihe ọkụkụ a na ngwanrọ n'oge na-adịghị anya: